mayhninsi – စာမျက်နှာ 23 – MBC
CCMP – TOT Training
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ခရစ်ယာန်လူမှုဝန်ထမ်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှ ဦးဆောင်သော ဒုတိယအကြိမ်မြောက် CCMP – TOT Training ကို (၆-၁၂).၁၁.၂၀၁၈ ရက်အထိ ကရင် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ် နှစ် တစ်ရာပြည့် အဆောက်အဦး သင်တန်း ခန်းမ နှင့် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် HOLTI တွင် ပြုလုပ်ရာ ကရင်၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ […]
နိုဝင်ဘာ 10, 2018
“ ကမ္ဘာ့ နှစ်ခြင်းအမျိုးသမီးများ ဆုတောင်းရာနေ့”
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၀)ရက်၊ စနေနေ့ နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီအချိန် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် “ ကမ္ဘာ့ နှစ်ခြင်းအမျိုးသမီးများ ဆုတောင်းရာနေ့” အစီအစဉ်ကို အသင်းချုပ် အမျိုးသမီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဝိုင်စီစီ၊ အရှိုချင်းနှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်၊ MBCU၊ လားဟူနှစ်ခြင်း အဖွဲ့ချုပ်၊ ရန်ကုန်ကရင်နှစ်ခြင်းအနီးသာသနာနယ်အဖွဲ့၊ ချင်းနှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ ယုဒသန်အသင်းတော်၊ ဧမာနွေလအသင်းတော်၊ သုဝဏ္ဏ […]
၁၇၈ ကြိမ်မြောက် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေး
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးကို ၁၇၈ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၆-၉)ရက်များတွင် အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် ကျင်းပပါသည်။ နေ့စဉ်နံနက် ၈း၀၀ နာရီမှစတင်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရာ ပထမ (၆.၁၁.၂၀၁၈)တွင် Rev. Dr. ဆိုင်မွန်ပေါင်ခန့်အင်၊ (၇.၁၁.၂၀၁၈)တွင် Rev. ကေဒီတူးလွမ်၊ (၈.၁၁.၂၀၁၈)တွင် Rev. Dr. ဆမို ဇော်ဝင်း၊ […]
နိုဝင်ဘာ 5, 2018
ရေရှည်တည်တံ့သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း
၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၅)ရက် နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် တနင်္လာနေ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့သော ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကို အသင်းချုပ် ကူရှင်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အသင်းချုပ် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အင်္ကျီအဖြူရောင် တူညီဝတ်ဆင်လျက် ဒူးထောက်လျက်၊ အဖြူရောင်ကြိုးများပတ်လည်ကာလျက်၊ ဖယောင်းတိုင်များထွန်းညှိလျက် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အထူးဆုတောင်းခဲ့ကြပါသည်။ ဖယောင်းတိုင်မီး ထွန်းညှိခြင်းကို အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး Rev. Dr. ထန်ကျင့်လျန်းဦးဆောင်လျက် အမျိုးသားဌာနတာဝန်ခံ […]